Ogaden News Agency (ONA) – Xamaas oo Gacanta Ku Dhintay Jawaasiis Yuhuuda U Shaqaysa.
Xamaas oo Gacanta Ku Dhintay Jawaasiis Yuhuuda U Shaqaysa.
Maamulka Falastiiniyiinta ee urur Xamas ee ka taliya Marinka Gaza ayaa soo bandhigay xogta koox gaadheysa 45 qof oo Falastiiniyiin ah oo u adeegayey Israel kuwaasi oo ka qeyb qaatay dilkii Sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xamaas.
Masuul sare oo kamid ahaa Xamaas laguna magacaabi jiray Mazen Faqha ayaa la dilay 24-kii bishii Maarso xili uu kusii jeeday gurigiisa Gaza, waxaana la sheegay in dilkiisa ay ka qeyb qaateen kooxdan la qabtay ee Falastiiniyiinta ah oo telefoonka ku hagayey sirdoonka Israel oo la sheegay inay dilka fuliyeen.
Sadex kamid ah 45-ta qof ee gacanta lagu dhigay ayaa qirtay inay qaabilsanaayeen xog aruurinta dhaq dhaqaaqa sarkaalka la dilay sida uu sheegay Taliyaha Amniga Gudaha ee Gaza Gen. Tawfiiq Abu Naciim oo shir jaraa’iid qabtay.
Marxuum Faqha ayaa kamid ahaa 10 qof ee ugu horeeya diiwaanka Israel ee dadka ay baadi goobeyso, wuxuuna horey usoo galay xabsiga Israel sanadkii 2003 kadib markii laga soo qabtay Daanta Galbeed. Faqha ayaa lagu eedeeyey abaabulo weeraro ka dhan ah Yuhuuda, waxayna Israel ku xukuntay Xabsi daa’in.
Hase yeeshee Mazen Faqha ayaa kamid ahaa kun maxaabiis ah oo ay Israel ku bedalatay askarigii Xamaas ka qabatay ee Gilat Shalit. Inkasta oo Israel ay beenisay inay ka danbeyso dilka sarkaal kan, hadana ma’aha markii ugu horeysay oo ay khaarijiso xubno sar sare oo ka tirsan ururada Falastiin, waxayna sidan oo kale horey u dishay hogaamiyaal badan oo ka tirsanaa Xamaas oo uu kamid ahaa Wadaadkii waayeelka ahaa ee Axmed Yassin oo ay dileen sanadkii 2004.